Ururka Daalibaan oo shaaciyey geerida Jalaaludiin Xaqaani – Madal Furan
Hoy > Warka > Ururka Daalibaan oo shaaciyey geerida Jalaaludiin Xaqaani
Madal Furan – Aasaasihii kooxda mintidiinta ah ee Xaqaani ayaa geeriyooday ka dib markii uu sannado badan xanuunsanaa, sida ay ku dhawaaqday kooxda Taalibaanta Afqaanistaan.
Kooxda Xaqaani ayaa mas’uul ka ahayd weerarro badan oo dhawaan lagu qaaday ciidammada Afqaanistaan iyo kuwa Gaashaan buurta Nato ee ku sugan dalkaas.
War qoraal ah oo ka soo baxay Taalibaanka Afqaanistaan ayaa lagu yiri “Sida uu ugu soo dadaalay diinta Alle intii uu yaraa iyo intii uu caafimaadka qabay, ayuu sidoo kale ula soo rafaaday xanuun waqti dheer hayay sannadihiisii dambe,”
War bixinta ay shaaciyen Talibaan ayay ku sheegeen in Jalaluddin Xaqaani uu ahaa “Dagaal yahan aan gabasho lahayn… uuna ka mid ahaa mujaahidiinta ugu dadaalka badnaa waqtigiisa soo maray.”
Kooxda Xaqaani ee uu ninkaan aasaasay ayaa ka mid ahayd kooxaha mintidiinta ah ee ka dagaallamay dhulka qabaa’ilka ee ku yaalla xadka u dhexeeya dalalka Afqaanistaan iyo Baakistaan.
Hay’adda NISA oo soo bandhigtay Sawirrada labo Sarkaal ka tirsanaa jiray Al-Shabaab.
Madaxweyne Puntland oo Magacaabay Guddi.